यी हुन् युरोकप छनोट खेल्ने २३ सदस्यीय स्पेनको टोली
एजेन्सी । स्पेनले सन् २०२० को युरोकप छनोटका लागि २३ सदस्यीय फुटबल टोलीको घोषणा गरेको छ । शुक्रबार घोषणा गरिएको टोलीमा मिडफिल्डर सान्टी कार्जार्लाले ६६८ दिनपछि पुनः राष्ट्रिय टोलीमा प्रवेश पाएका छन् । चोटका कारण टोलीमा नपरेका उनलाई लामो समयपछि प्रशिक्षक लुइस इन्रिकेले स्थान दिएका हुन् । विस्तृतमा
खेल सकिए लगत्तै जब मैदानमा लडाइको माहौल बन्यो
तीन प्रशिक्षक परिवर्तन गर्दा पनि रियल मड्रिडकाे ‘झुर रेकर्ड’
जिदानको कठोर मन अन्तिम खेलमा पनि बेलका लागि पग्लिन सकेन
ला लिगाका खेल सकिए, कुन टिम च्याम्पियन्स लिग खेल्दै कुन रेलिगेट ?
यस सिजन झुर खेल खेलेको रियल मड्रिड अन्तिम खेलमा पनि पराजित
म्यान्चेस्टर सिटी छाडेको कोम्पनी एन्डरलेच्टको खेलाडी व्यवस्थापक
यी हुन् वेस्ट इन्डिजबाट विश्वकप खेल्ने खेलाडी, ब्राभो र पोलार्ड रिजर्भ प्लेयर
रोनाल्डो इटालियन क्लब युभेन्टसमाः पारिश्रमिकको कुरा भने मिलेन
काठमाडौं । पछिल्लो समय प्रकाशित मिडिया रिपोर्टका अनुसार रियल मड्रिडका स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई युभेन्टस पठाउन तयार भएपनि उनको पारिश्रमिकको बारेमा कुरा मिलेको छैन ।
जर्मनीले राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षक परिवर्तन नगर्ने
काठमाडौँ । जर्मनीले राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षक परिवर्तन नगर्ने भएको छ । टोली विश्वकपको समूह चरणबाटै बाहिरिए पनि जाचिम लोउलाई नै प्रशिक्षणको जिम्मेवारी दिने बताइएको हो ।
जापानका यी दुई खेलाडीले पनि लिए अन्तराष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास
काठमाडौँ । जापानी राष्ट्रिय टिमका कप्तान माकोतो हासिबीले राष्ट्रिय टोलीबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्।
विश्वकप फुटबलः प्रिक्वार्टरफाइनल समीकरण पूरा
काठमाडौँ । रुसमा जारी विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता २०१८ को प्रिक्वार्टरफाइलन समीकरण पूरा भएको छ ।
विश्वकप–२०१८ः ठूला टोली घर फर्किएसँगै थप रोमाञ्चक बन्दै, यस्तो छ नालीबेली
विश्वकपमा विश्वकै महँगा दुई ब्राजिलियन खेलाडी
काठमाडौँ । ब्राजिलका दुई स्टार खेलाडीले विश्वकपमा ठुलै चर्चा पाइरहेका छन् । नेयमार र कोटिन्हो दुई विश्वकै महँगा खेलाडीहरु हुन् ।
मेस्सी भर्सेस रोनाल्डो, विश्वकपमा को कति तगडा ?
काठमाडाैँ । विश्वकपमा दुई चर्चित खेलाडीहरुले कमाल गर्न सकेनन् ।
इटालियन क्लब युभेन्ट्स जाने तयारीमा रोनाल्डो
काठमाडौँ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार इटालियन च्याम्पियन युभेन्टेसले रियल मेड्रिडका स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई भित्र्याउने प्रयास थालेको छ ।
विश्वकपमा प्रयोग भिएआरविरुद्ध १५ मिलियन यूरोको क्षतिपूर्ति दावी
एजेन्सी । फिफाले विश्वकपमा प्रयोग गरिरहेको भिडियो एसिस्टेन्ट रेफ्री (भिएआर)को कन्सेप्ट आफ्नो भएको दावी गर्दै क्षतिपूर्तिको दावी गरेका छन् ।